Iibhloko zeAnode Carbon
Amandla ePhakamileyo eGrafayithi / i-Electrode / HP
Rhoqo Amandla grafayithi i electrode / RP
Amandla ePhakamileyo eGrafite ye-Electrode / UHP
Uvavanyo lweCPC kumzi mveliso wethu
Eyona ndawo iphambili yesicelo se-coke e-China ngumzi mveliso we-aluminium ye-electrolytic, ebala ngaphezulu kwe-65% yenani elipheleleyo le-coke, elandelwa likhabhoni, i-silicon yoshishino kunye namanye amashishini anyibilikisayo. Ukusetyenziswa kwecoke ecwecwe njengamafutha ikakhulu kukungcwaba ...
Athini amanyathelo okunciphisa ukusetyenziswa kwe-electrode
Okwangoku, amanyathelo aphambili okunciphisa ukusetyenziswa kwe-electrode yile: Ukulungiselela iiparameter zenkqubo yokuhambisa umbane. Iiparamitha zonikezelo lwamandla zezona zinto ziphambili ezichaphazela ukusetyenziswa kwe-electrode. Umzekelo, kwiziko le-60t, xa i-voltage esecaleni ye-410V kunye ne-curren ...
Graphite electrode CN iindaba emfutshane
Kwisiqingatha sokuqala se-2019, imakethi ye-graphite electrode yasekhaya ibonakalise imeko yokunyuka kwamaxabiso kunye nokuwa. Ukususela ngoJanuwari ukuya kuJuni, imveliso ye-18 ye-graphite electrode e-China yayingama-322,200 eetoni, ukuya kuma-30.2% ngonyaka-ngonyaka; Chin ...
I-2019 iThailand yaMazwe ngaMazwe yokuKhangela ukuThengisa iMetallurgical Heat Exhibition
ngomphathi ku 20-08-08
Indawo: BITEC EH101, Bangkok, Thailand Commission: Umbutho weziseko zaseThailand, iziko lokuphucula imveliso yemveliso yeziseko Co-abaxhasi: Umbutho weziseko zaseThailand, umbutho weziseko zaseJapan, umbutho weziseko zaseKorea, umbutho weziseko zaseVietnam, iTaiwan fo ...
B # 1202, Furuite Times Square, Handan City, Hebei kwiPhondo, China